Kulankii Muuse Biixi & Uhuru Kenyatta maxaa kasoo baxay? | KEYDMEDIA ONLINE
Kulankii Muuse Biixi & Uhuru Kenyatta maxaa kasoo baxay?
Labada hoggaamiye ayaa kulankooda ku lafaguray arrimo muhim ah oo ay wadaagaan Kenya iyo Somaliland.
NAIROBI, Kenya - Madaxweynaha Maamuulka Somaliland, Muuse Biixi Cabdi oo booqoasho ku jooga Nairobi ayaa la kulmay Madaxweynaha Kenya, Uhuru Kenyatta.
War-Saxaafadeed Madaxtooyadda Somaliland soo saartay ayaa lagu sheegay in labada mas'uul ay kaga wada hadleen kulankooda qodobo dhawr ah oo u badan danaha labada dhinac, xagga ganacsiga iyo socdaalka.
Dhanka kale, War qoraal ah oo maanta ka soo baxay Madaxtooyada Kenya ayaa lagu sheegay in wafdiga Somaliland ay wadahadal la yeesheen masuuliyiinta Kenya.
Labada hoggaamiye ayaa kulankooda ku lafaguray arrimo muhim ah oo ay wadaagaan Kenya iyo Somaliland, mana jirin wax faah-faahin ah oo la siiyay Saxaafadda.
Qoraalka ayaa lagu sheegay in labada dhinac ay mar labaad kulmi doonaan Talaadada berri ah si ay u soo gunaanadaan wadahadalladooda.
Kenya wax joogitaan diblomaasiyadeed ah kuma laha Somaliland hase yeeshee waxay dareensantahay muhimadda xasilloonida siyaasadeed iyo midda dhaqaale ee gobolka.
Sidoo kale Kenya ayaa xiiseynaysa xoojinta iyo ballaarinta ganacsiga badeecadaha iyo adeegyada taasi oo ay sii dheertahay maalgashiga oo xuddun u ah iskaashiga iyo koboca dhaqaalaha ee gobolka.
Booqashada Muusa Biixi waxay ku soo aadeysaa xilli uu aad u sii xumaanayo xiriirka ka dhexeeya Kenya iyo dowladda Soomaaliya.
Dabayaaqadii bishii November war qoraal ahaa oo ka soo baxay Wasaaradda Arrimaha Dibadda Soomaaliya ayaa lagu sheegay in safiirkii u fadhiyay Nairobi looga yeeray Muqdisho, halka midkii Kenya ee Soomaaliya lagu amray in uu dalkiisa dib ugu noqdo si uu wadatashi ula soo yeesho dowladdiisa.
Arrintan ayay dowladda Soomaaliya ku macnaysay mid ay kaga jawaabeysay faragelin ay Kenya ku samaysay arrimaha gudaha Soomaliya.
Kenya ayaa beenisay in faragelin ay ku hayso arrimaha gudaha ee Soomaaliya, ayadoo sheegtay in aysan wali helin Warqad rasmi ah oo cabashada Soomaaliya ku saabsan.
Kenya ayaa sheegtay in hadalka ay ka maqashay Warbaahinta oo keli ah.
Soomaaliya iyo Kenya waxaa horay u dhex yaallay muran badeed haatan ay kiiskiisu gacanta ku hayso Maxakmadda caalamiga ah.